ब्रान्ड म्यानुअल, कर्पोरेट पहिचान प्रबलित | क्रिएटिव अनलाइन
जुडित मर्सिया | | ग्राफिक डिजाइन
ब्रान्ड म्यानुअल को निर्माण मा स्थित छ कर्पोरेट पहिचान, विशेषताहरू, मानहरू र विश्वासहरूको सेट जुन एक उत्पाद, कम्पनी वा सेवा वरपर छ। यसले हामीलाई प्रतिस्पर्धाबाट अलग गर्न मद्दत गर्दछ, हाम्रो पहिचानको दृढ कंकाल सिर्जना गर्न, अद्वितीय हुन र सकारात्मक ढ way्गमा बाहिर खडा गर्न। यो अनुशासन हो जुन अनुसन्धान, रणनीतिको योजना र तत्वहरूको डिजाईनबाट उत्पन्न हुन्छ।
कुनै ब्रान्ड वा लोगो सिर्जना गर्दा हामीले सबै पक्षहरूलाई ध्यानमा राख्नुपर्दछ, त्यो हो, यसका सबै अनुप्रयोगहरू ताकि सबै कुराको बीचमा समन्वय होस्। यो प्राप्त गर्नका लागि यो आवश्यक छ कि कम्पनीको रूपमा तपाईंलेaब्रान्ड म्यानुअल, कागजात जसले ती सबै विवरणहरू निर्दिष्ट गर्दछ जुन खातामा लिनुपर्दा ध्यानमा राख्नुपर्दछ ग्राफिक अवधारणा। संक्षेपमा, कसरी ब्रान्ड प्रयोग गर्नुपर्दछ वर्णन गर्नुहोस्।
1 हामी ब्रान्ड म्यानुअलमा कुन सामग्री फेला पार्न सक्छौं?
4 रंग टिपोलजी
6 बेस ग्रिड
9 समर्थन र अनुप्रयोगहरू
हामी ब्रान्ड म्यानुअलमा कुन सामग्री फेला पार्न सक्छौं?
ब्रान्ड म्यानुअलको सेक्सनहरू हामी समर्पित कम्पनी वा सेवाको प्रकारमा निर्भर हुन सक्दछ। हामीले यो बिर्सनु हुँदैन प्रत्येक कम्पनीको आ-आफ्नै आवश्यकता हुन्छ र त्यसकारण, अनुप्रयोगहरूले फरक मिडिया वा समर्थन कभर गर्न सक्छन्।
सुरुमा, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्व जसले हामीलाई थप व्यक्तित्व प्रदान गर्दछ लोगो हो। हामीले मार्क गर्नु पर्छ सम्मान क्षेत्र, हामी तत्वहरूको बिचमा खाली ठाउँहरू सन्दर्भ गर्दछौं, लोगो वरिपरि अनुमति दिइएको न्यूनतम खाली ठाउँ परिभाषित गर्दछौं। यस क्षेत्र भित्र कुनै अन्य तत्वहरू लागू गर्नु हुँदैन। यो सही अनुप्रयोगको ग्यारेन्टी गर्दछ र हाम्रो ब्रान्डको सुवाच्यता।
यस सेक्सनमा हामी अन्य अनुप्रयोगहरू निर्दिष्ट गर्न सक्दछौं जुन हाम्रो लोगोका विभिन्न प्रकारहरूको संयोजन, विभिन्न ढाँचाहरूमा प्रजननको न्यूनतम आकार, लोगोका विभिन्न संस्करणहरू, अन्यहरू।
परिभाषित गर्नुहोस् मुख्य रंगहरू त्यो प्रतिनिधित्व गर्दछ हाम्रो ब्रान्ड प्रयोगकर्ताको दिमागमा एक पहिचान बनाउन आवश्यक छ। र color्ग प्यालेट बिभिन्न तरीकाले लागू हुन सक्छ समर्थनको आधारमा जुन हामी यसलाई लागू गर्न चाहान्छौं, हामीले यसलाई पुस्तिकामा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्दछ। रंगहरू हामी जहिले पनि समान हुनुहुनेछ भनेर सुनिश्चित गर्न भित्ताहरूसँग र color्ग दर्साउनुहोस् सीएमवाईके, आरजीबी र वेब।
अर्कोतर्फ, हामीले पनि त्यस्तै गर्नुपर्दछ दोस्रो रंग र थकित उदाहरण को लागी, हामी परिभाषित गर्न सक्छौं कि खैरो र color आधार टेक्स्ट पढ्नको लागि प्रयोग गरियो, स्तम्भहरूलाई टेबुलमा विभाजन गर्न।
दुबै मुद्रित र डिजिटल मिडियाले उहि र use प्रयोग गर्छ भनेर निश्चित गर्न, तालिका सिर्जना गर्न सकिन्छ सीएमवाईके (मुद्रित) र आरजीबी (डिजिटल) मानहरूको सारांशको रूपमा।
प्राविधिक तरिकाले बुझ्नको लागि विभिन्न र typ टाइपोगोलिसहरू, हामी तिनीहरूलाई चार टाईपोलॉजीहरूमा विभाजन गर्दछौं।
सबै भन्दा पहिले हामी फेला पार्दछौं प्यान्टोननिश्चित रूपमा तपाईंले उनीहरूको बारेमा सुन्नुभएको छ किनकि तिनीहरू सबैभन्दा अधिक प्रयोग गरिएका रंगहरू हुन्। यो एक को बारे मा छ रंग सूची। विशिष्ट प्यान्टोन छनौट गरेर, तपाईं यो निश्चित गर्नुहुन्छ कि जब तपाईं प्रिन्ट गर्न प्रोजेक्ट लिनुहुन्छ, स्क्रिनको र color कागजमा जस्तै नै छ।
दोस्रो, हामी यसको बारेमा कुरा गर्छौं CMYKयी इनिशिअलहरू र theहरूसँग मिल्दछन् जुन प्रिन्टरहरूले प्रयोग गर्दछ बाँकी र getहरू प्राप्त गर्न। यो संयोजन स्यान (निलो), म्याजेन्टा, पहेंलो र कालो मिलेर बनेको छ। परिवर्णी शब्दहरू अंग्रेजीमा शब्दहरू अनुरूप छन्। सीएमवाईकेमा र Theहरू ठ्याक्कै उस्तै हुँदैनन्, किनकि यसले प्रत्येक प्रिन्टरको क्यालिब्रेसनमा निर्भर गर्दछ।
हामी यससँग जारी राख्छौं रंग प्रदर्शन गर्नुहोस्भनिन्छ RGB, रातो, हरियो र नीलो संयोजनको साथ गठन गरिएको। हामी ती सबै डिजिटल समर्थनको लागि प्रयोग गर्ने छौं।
समाप्त गर्न HTML यो छ आंकडा र अक्षरहरू समावेश गर्ने कोड हो जुन वेब डिजाइनमा रंगहरू निर्धारण गर्न प्रयोग गरिन्छ।
एउटा त्रुटि जुन हामीले बेवास्ता गर्नुपर्दछ हाम्रो ब्रान्डको अनुसार फन्टलाई चिन्ह लगाउँदैन। सँधै समान प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ फन्ट परिवार कम्यूनिकेट गर्न। थप रूपमा, हामीले बिभिन्न तौललाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्दछ, यदि हामी बोल्ड (बोल्ड), नियमित वा हल्का (ठीक) प्रयोग गर्छौं भने।
प्रत्येक टाइपफेसले हामीलाई बिभिन्न सुविधाहरू प्रदान गर्दछ, यदि हामी आधुनिकता बताउन चाहन्छौं, नवीनता हामी एउटा सेन्स सेरीफ (छनौट बिना) अप्ट इन गर्दछौं, हामी प्रयोग गर्न सक्दछौं। गुगल फन्टहरू हामीलाई छनौटमा प्रेरित गर्न।
ढाँचा अनुसार फन्ट आकार र रेखा स्पेसिंग निर्दिष्ट गर्न नभुल्नुहोस्। हामी प्रत्येक ढाँचाको लागि आवश्यक जानकारीको साथ टेबलहरू सिर्जना गर्न सक्दछौं। थप रूपमा, हामीले हाम्रो पाठहरू कुन रंग देखिने छन् भन्ने कुरा हामीले ध्यानमा राख्नुपर्दछ। एउटा विचार भनेको पाठलाई उनीहरूको महत्त्वको आधारमा विभाजन गर्नु हो:
ग्राफिक्स वा क्याप्शनलाई सन्दर्भ गर्दै पाठहरू।
आधार ग्रिड एक मद्दत हो तत्व स्थिति गर्न क्रमबद्ध ढ in्गले, त्यो हो, अन्तरिक्षमा प्रत्येक तत्वको सुसंगत ढंगले स्थिति राख्नु। यसले हामीलाई रचनाहरूको वितरणमा लचिलोपन पनि अनुमति दिन्छ। लक्ष्य एक दिन छ समान उपस्थिति.
आधार ग्रिड मुख्य टेक्स्ट लाइनको स्पेसिंगमा आधारित छ, पदहरू बीचको दूरी मार्क गर्दै। आधार ग्रिड परिमार्जन गर्न अनिवार्य छ ढाँचामा जुन हामी लागू गर्न चाहान्छौं, यो एक ठूलो ढाँचामा समान हुँदैन A2 A4 भन्दा AXNUMX जस्तो।
छविहरूमा स्थिरता सुनिश्चित गर्न हामीले ब्रान्डको भिजुअल मानहरू चिन्ह लगाउनु पर्छ। हामी प्रतिनिधित्व गर्न चाहेको विशेषताहरू परिभाषित गर्न सक्दछौं, उदाहरणका लागि, हामी परिभाषित गर्न सक्दछौं कि हामी दैनिक जीवनको अवस्था, यथार्थवादी र प्रामाणिक प्रतिनिधित्व गर्न चाहन्छौं। मध्यम-वर्गका व्यक्तिहरू, परिवारहरू, हाँस्दै, सुन्दर देखिन्छन्।
परिभाषित गर्न दुई प्यारामिटरहरू भेटिए:
दृश्य भाषा भनेको छविहरूको सामग्री परिभाषित गर्दछ
छविको शैलीले औपचारिक मापदण्ड परिभाषित गर्दछ जुन छविले पूरा गर्नुपर्दछ। यस सेक्सनमा हामी प्रकाश, र or वा परिप्रेक्ष्य समावेश गर्दछौं।
अझ सावधानीपूर्वक हुनको लागि, फोटोग्राफिक शैलीको साथ सूची बनाउने सम्भावना विचार गरिएको छ, टोन, र color्ग प्यालेट, पृष्ठभूमिहरूको प्रयोगलाई संकेत गर्दै। श sample्का हटाउनको लागि नमूना छविहरू संलग्न गर्नु राम्रो स्रोत हो।
पिक्टोग्राम प्रतीक वा छवि आइकनहरू हुन् जसले जानकारीलाई सरल र ग्राफिक रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दछ। तिनीहरू सकेसम्म स्पष्ट हुनुपर्दछ र भाषामा निर्भर हुँदैन। पिक्चरोग्रामको क्याटलग छनौट गर्न को लागी उपयोगी हुनुपर्दछ तिनीहरूको हातमा सँधै साथसाथै, यो सुनिश्चित गर्नका साथै हामी ग्राफिक लाइन कायम राख्छौं।
समर्थन र अनुप्रयोगहरू
कम्पनीको दैनिक गतिविधि भित्र प्राय: प्रयोग हुने बिभिन्न समर्थन लाई मानक बनाउँदा हाम्रो ब्रान्ड पहिचान सुदृढ हुनेछ। हामी तपाईंलाई केहि छोड्छौं उदाहरणहरू विचार गर्न:
पत्र पेपर A4
संक्षेपमा, कम्पनीको प्रकारले ब्रान्ड म्यानुअलको आवश्यकतालाई परिभाषित गर्दछ। जसै हामी विस्तार गर्छौं, हामीले निश्चित रूपमा ग्राफिकल प्यारामिटरहरू विस्तार गर्न आवश्यक पर्दछ र त्यसकारण म्यानुअल जानु पर्छ नवीकरण गर्दैकम्तिमा वार्षिक रूपमा।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » ग्राफिक डिजाइन » ब्रान्ड म्यानुअल, यसको बारे पत्ता लगाऔं